အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေ ကြည့်ကြမလဲ ....? - MM Live News
အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေ ကြည့်ကြမလဲ ….?
အထူးသဖြင့် အောင်လ ရဲ့ နည်းပြ ဟင်နရီ ဟုဖ် ဟာ ကန်ချက်တွေ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကန်ချက်တွေ ထုတ်သုံးလာဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။Part2ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်း မြန်မာ စံတော်ချိန် 2.30 မှာ စတင်မှာပါ။ အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် အချိန်ကတော့ ညနေ 5.00 နာရီမှာ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ Skynet မရှိသူတွေ အနေနဲ့ MRTV Entertainment ကနေလဲ ပြသသွားမယ်လို့ ကနဦး သတင်းတွေ အရ သိရပါတယ်။Credit – SPORTS MYANMAR
အထူးသျဖင့္ ေအာင္လ ရဲ႕ နည္းျပ ဟင္နရီ ဟုဖ္ ဟာ ကန္ခ်က္ေတြ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ နာမည္ႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကန္ခ်က္ေတြ ထုတ္သုံးလာဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ဟန္ ရွိပါတယ္။Part2ပြဲစဥ္ေတြကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ 13 ရက္ေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္း ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ 2.30 မွာ စတင္မွာပါ။ ေအာင္လ နဲ႔ ဗီရာ တို႔ ထိုးသတ္မယ့္ အခ်ိန္ကေတာ့ ညေန 5.00 နာရီမွာ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
အဲဒီပြဲစဥ္ကိုေတာ့ Skynet မရွိသူေတြ အေနနဲ႔ MRTV Entertainment ကေနလဲ ျပသသြားမယ္လို႔ ကနဦး သတင္းေတြ အရ သိရပါတယ္။Credit – SPORTS MYANMAR
နိုင်ငံခြားရောက် ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် တီးလုံးသံကြားပြီး မြို့လယ်ခေါင်မှာ ထ က ခဲ့တဲ့ Video